ANKOHONANA : ASAFI, SERVICE COMMUNAUTAIRE, SEKOLY SABATA | ADVANTISTA Federasiona Madagasikara Afovoany
DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA FMC Fitsidihana ny Distrika Ankazobe II, Sabata faha-08 Desambra 2018
Tongasoa ho anisan'ny ankohonan'Andriamanitra
TONGASOA AO AMIN’NY ANKOHONAN’ANDRIAMANITRA
Miarahaba anao tonga soa ao amin’ity Ankohonan’Andriamanitra mahafinaritra ity!
Romana 6:4 « Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika amin’ny fiainam-baovao. »
• Rehefa nanaiky an’i Kristy ianao ka natao batisa dia miova ny fiainanao ary miaina sy manomboka fiainam-baovao ianao sady lasa olom-baovao ao amin’i Kristy.
• Hatramin’izao dia Kristy no fototra sy ivon’ny fiainanao.
• 2Kor 5.17: « Raha misy olona ao amin’i Kristy olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. »
Amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina miasa ao anatinao dia mihamiova isan’andro ny fiainanao amin’ny maha-olombaovao anao: vaovao ny fisainana, vaovao ny zava-manosika anao, vaovao ny zavatra tianao, vaovao ny fomba ijerenao ny fiananao sy ny fihaikany rehetra, manana fomba fiaina vaovao ianao ary mandray namana vaovao.
Zava-dehibe mahafaly indrindra ny hamantaranao fa ao anatin’ny bokin’ny fiainana ny anaranao ankehitriny sady voasoratra ao amin’ny rejistry ny fiangonan’Andriamanitra maneran-tany ihany koa.
Manomboka izao ny ho tanjonao dia ny hiaina mandrakariva eo amin’ny fanatrehan’ Andriamanitra sy hanahaka an’i Kristy. Ho fifaliana ho anao hatrany ny hihaino ny feony, ny hahatsapa ny fitiavany sy hianatra izany bebe kokoa hatrany. Antsoina ianao mba hahafoy ny zavatra rehetra ho Azy hanaraka am-pitiavana izay sitrapony rehetra mba hanananao ny fianam-pandresena Kristiana.
Asaina sy iangaviana ary ianao hikolokolo ireto fahazarana tsara ireto isan’andro:
1. Fifandraisana sy tapaka sy maharitra miaraka amin’ny Tompo
2. Fifandraisana maharitra sy mitohy amin’ny fiangonana
3. Fijoroana ho vavolombelony amin’ny hafa.
FIFANDRAISANA TSY TAPAKA AMIN’NY TOMPO
• Ny teny hoe fifandraisana na firaisana amin’ny Tompo dia araka ny fifandraisana voalaza ao amin’ny 1Kor 1.9: « … hanananareo firaisana amin’ny Zanany dia Jesosy Kristy Tompo. ».
• Miankina amin’ny fanokanan-tenanao isan’andro ho an’ny Tompo kanefa tena ilainao hampitomboana sy hanatanjahana ny finoanao izany handresenao ny fakam-panahy.
Ireto ary no dingana harahinao:
• 1. MANANA FOTOANA HIVAVAHANAO MANOKANA:
• Manokana fotoana hivavahanao manokana irery fa ny vavaka no rivotra hamelombelona ny fanahy
• Manaova vavaka fanelanelanana, mivavaha ho an’ny mambry ny ankohonanao. Ataovy lisitra izay tianao hoentina am-bavaka isan’andro. (Joba 42.10) Sitrana Joba rehefa nivavaka ho an’ireo sakaizany.
Aza adino ny mivavaka mialoha ny sakafo rehetra. Misaora amin’ny zavatra rehetra ary mivavaha ka aza mitsahatra. 1 Tes 5.17,18
• 2. FOTOAM-PIVAVAHANA AO AN-TOKANTRANO
• isa-maraina alohan’ny hivoahana ny trano sy isan-kariva alohan’ny hatoriana dia vorio ny ankohonanao hanao fanompoam-pivavahana. Amin’ny maraina dia angataho ny fiarovan’ny Tompo mandritra ny tontolo andro ary amin’ny hariva angataho ny fambomban’ireo anjely mandritra ny ora hialanao sasatra
Azonao atao ny mampiasa boky fandinihan-tena toy ny fiambenana maraina, na mofon’aina, leson’ny Sekoly Sabata ankizy, tanora, lehibe.
Ravaho hira masina sy vavaka mafana ary tsianjery andinin-tSoratra Masina ny fotoana hihazonana ny ankohonanao amin’ny fifaliana sy firaisana.
3. IANARO NY LESON’NY SEKOLY SABATA
Ianaro manokana tsy tapaka isan’andro ny Leson’ny Sekoly Sabata amin’ny maraina na hariva na amin’ny fotoana rehetra. Azonao ampiasaina amin’ny fotoam-pivavahana ihany koa ireo. Hanampy anao handalina ny Tenin’ Andriamanitra izany
4. MAZOTOA MAMAKY BOKY AMAN-GAZETY NY FIANGONANA ADVANTISTA
Mampahery sy mampahafantatra anao bebe kokoa ny fiangonana advantista ireny
Tsidiho ny www.adventist.org
• 5. VAKIO ISANANDRO NY BAIBOLINAO•
Azonao atao ny manao « plana famakiana Baiboly herintaona »
• Azonao atao koa ny mandinika lohahevitra ka mikatsaka ny toko sy andininy rehetra manohana izany
• Aza adino ny mivavaka mialohan’ny hanokafanao ny Baiboly mba hitarihan’ny Fanahy Masina anao amin’izany.
• 6. MAMAKIA BOKIN’NY FANAHIN’NY FAMINANIANA
• Ampolony maro ireo boky nosoratan’i Ellen G White manazava ny Baiboly. Tsara ny hamakianao ireo isan’andro hanaovanao fandinihan-tena sy tari-dalana amin’ny ara-panahy. Hanitatra ny fahafantaranao an’Andriamanitra sy hanatanjaka ny finoanao ireo.
Mambry ny tenan’i Kristy isika manomboka izao ary izy lohan’izany Tena izany. Tena ilaina tokoa ny « firaisana » (firahalahiana) ao amin’ny fiangonana 1 Jao 1.3, 7)
Salamo 133:1 « Endrey tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy ny miara-monina. » hoy ny mpanao Salamo. Zanak’Andriamanitra isika ka mety indrindra ny hiarahantsika monina eo amin’izay toerana itoriana ny Tenin’Andriamanitra
Salamo 122.1 « Faly aho raha hoy izy ireo tamiko: andeha isika ho any an-tranon’i Jehovah. » Mitondra tombontsoa lehibe ara-panahy ho antsika izany toy ny hoe:
Manatanjaka ny aim-panahy
Mamoky ny fo ny toriteny, hira, vavaka
Manandrata vavaka mangina ianao rehefa tonga eo amin’ny toeram-pivoriana sy alohan’ny hialana izany. Tongava mandrakariva ara-potoana ary aoka hanaja ny toeram-pivavahana sy hanokam-potoana hisaintsainana lalina rehefa tonga ao.
Ny mambra mavitrika dia:
Hamonjy tsy tapaka ny fiaraha-mivavaka rehetra (Heb 10.25)
Vonon-kifanampy amin’ny mpitandrina. Tsy toerana iandrasana fanompoana fotsiny ireny fa toerana hanompoana sy handraisanao anjara araka ny talenta omen’ny Tompo anao.
Tsy tanteraka tsy akory ny fiangonana kanefa dia tena ifantohan’ny fitiavan’i Kristy manokana izy. (Efesiana 5.25, 27)
IREO ZAVATRA MAMPIAVAKA NY FIANGONANA
Tombontsoa ny maha-anisan’ny fiangonana kanefa misy adidy aman’andraikitra lehibe ihany koa. Asaina mandray anjara amin’ny zavatra rehetra isika ho fanatanjahana ihany koa ny aim-panahin’ny hafa iray fiangonana amintsika.
Ireto avy ireo fivoriana voatendry tokony hatrehintsika:
Ny kaonferansa/Asa Fitoriana
Ny Kilasin’ny Baiboly
Ny Kilasin’ny Mpampianatra
Hahita olona tsy tanteraka mandrakariva ianao ao amin’ny fiangonana. Tsy fitoerana masina ho an’ny olona masina ny fiangonana fa hopitaly itsaboana ny mpanota. Kristy no ilay dokotera lehibe mpanasitrana fanahy, misy anefa ireo izay marary tsy mety hositraniny. Aoka ho entina am-pitiavana, sy fahendrena izy ireny. Hajao mandrakariva izy ary aza sorena raha tsy tia anao izy.
Porofo ireny fa mbola marary izy. Ataovy fahazarana mandrakariva ny mivavaka ho azy ireo sy ireo tonga mamangy ny fiangonantsika.
MPITANTANA FANANAN’ANDRIAMANITRA IANAO
Tombontsoa lehibe ho anao ny maha-mpitantam-panan’Andriamanitra anao. Napetrak’Andriamanitra aminao ireo ka aoka hotantanana amim-pahatokiana tsara:
1. vola, fananana, tany, sns.
2. Talenta sy fahazara-manao
3. Ny vatana
4. Ny fotoana
Antsoin’Andriamanitra ianao hanana fanahin’ny fandavan-tena sy fahalalahan-tanana hanohana ny Asany sy ireo manodidina anao.
Aoka ary ho mahatoky ianao amin’ny famerenana amin’ny Tompo ny ampahafolony rehetra sy ny fanatitra (Malakia 3.10-12)
Homen’ny fiangonana valopy ianao hanampy anao hanao drafitra tsara ho amin’izany.
Ankoatry ny ampahafolony dia manokana fanatitra an-tsitrapo ho an’Andriamanitra izay tokony hitovy amin’ny ampahafolony ihany koa.
Raha misy ankizy ao an-tokantrano dia ampanandramo ny fifalian’ny manome toy izany koa ka asaivo mangataka valopy.
Ny fanatitra dia hanohanana ny fiangonana eo an-toerana sy manerana izao tontolo izao.
RAHA HIFINDRA TOERANA IANAO
Rehefa atao batisa ianao dia soratana ao amin’ny rejistry ny mambra eo an-toerana izay nandray anao. Raha hifindra toerana kosa ianao dia aza adino ny manatona ny sekreteran’ny fiangonana kasaina idirana ary mangataha taratasy fifindrana aminy satria Ankohonan’Andriamanitra iray ihany isika rehetra maneran-tany.
Aza afangaro ny hoe mambra ny Sekoly Sabata sy mambran’ny fiangonana. Ianao dia mambry ny SS ihany koa ary tombontsoa lehibe izany.
MIZARA AN’I KRISTY AMIN’NY HAFA
Ny fanandramana mahafinaritra indrindra eo amin’ny ara-panahy dia ny mitarika ny hafa ho eo amin’i Kristy. Miboiboika hafaliana ny fonao ankehitriny noho ireo fahamarinana sarobidy hita sy nasehon’ny Tompo anao tao amin’ny Teniny. Miredareda ao am-ponao ny hilaza avy hatrany ny fahazavana voarainao amin’izay mifanena aminao. Nefa, mety hatahotra ianao ka hanao hoe : « ho haiko ve izany hijoro ho vavolombelona izany ? »; “mbola tsy ampy fahalalana loatra aho!”, « hataon’ny olona ahoana aho raha tsy mahatafavoaka manazava ny finoako ? ». Matetika isika no matahotra ny hanazava ny amin’i Daniela sy Apokalypsy, kanefa raha atoro anao ny fomba atao sy fanaovana azy dia ho vitanao io.
Inona moa no atao hoe fijoroana ho vavolombelona ?
Azo faritana tsotra hoe: “olona iray nihaona manokana tamin’I Jesosy tamin’ny alalan’ny Teniny ka ka mizara an’I Kristy amin’ny alalan’ny fiainany sy ny teniny.”
1. Ny fijoroana ho vavolombelona mahomby dia tsy maintsy ialohavan’ny fiainana vonton’ny vavaka.(Kolosiana 4:3)
2. Ny fanaovana namana, fisakaizana no fomba mahomby indrindra hahazoanao namana ho an’I Jesosy. Indro ary ny dingana hanampy anao amin’izany:
Fantaro sy resadresaho anombohy ny fifankazarana aminy ny mikasika:
a/azy na ny fianakaviany: ray amandreniny, namany, hava-teteziny, ny ankohonany sy fianakaviany ankehitriny.
b/Ny asa ataony: ny fialam-boliny, ny fianana ara-piarahamonina, fianarany, ny tanjona tratrariny,
d/Ny fivavahany: ny fiangonana nisy anao taloha? Ny fiangonana nisy ireo ray amandreninao?Mazotoa mihaino azy fatratra. Ataovy izay hahazoana ny fony. Miresaha ny zavatra tiany.
Miainga avy amin’ireo zava-misy ankehitriny: toe-karena, herisetra, ny vaovao, dia tantarao ny zava-dehibe nataon’ny Tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Araho ary ireto dingana fijoroana ho vavolombelona ireto:
– Ny fiainanao talohan’ny nanekenao an’I Kristy: very tsy manana fanantenana, fianana tsisy dikany sy feno tsy fankatoavana. Aza indraindraina ny fahotana fa andanio fotoana betsaka ny hoe nanao ahoana ny nanovan’I Jesosy ny fiainanao sy ny iasany ao amin’ny fiainanao ankehitriny.
– Nanao ahoana ny nahatonga anao ho Kristiana: vaovao mahafalin’ny famonjena ao amin’I Jesosy, Tantarao ny fitarihan’ny Fanahy anao tamin’ny toe-javatry ny fiainana rehetra
– Ny fiainanao hatramin’ny naha-kristiana anao: fomba fijery vaovao, fifaliana na dia ao anaty fahoriana aza, ny hery azonao amin’ny fandinihana ny Baiboly, ny fitarihan-dalana ataon’ny Tompo eo amin’ny lalanao. Lazao fa nampahery anao sy nanatanjaka finoana anao hatrany ny Tenin’Andriamanitra
1. Ny Fanahy no mandresy lahatra azy fa tsy ianao. Miaraha miasa amin’io Fanahy io ka tarafo ny fahareseny lahatra sy ny fiovam-pony.
2. Tsy ianao no laviny fa ny Tenin’Andriamanitra ary ampio izy hahatsapa izany.
3. Aza miasa irery fa mitadiava namana hanampy sy hiara-miasa aminao
4. Tsidiho any antranony izy, asao any an-trano izy hisakafo, asao izy any fivorian’ny Tarika madinika, fotoana manokana ao amin’ny fiangonanao, seminera, kaonferansa.
5. Angamba mety hahakivy anao amin’ny maha-olombelona ny sasany nefa aza mitsoak’ady fa tsy fantatsika ny fiasan’Andriamanitra sy ny fotoana mety tendreny
6. Aza atao sesi-mototra aminy ny fampianarana sy programa sao dia leo anao indray izy. Raha mbola tsy mety hiaraka miangona aminao izy dia tazomy hatrany ny fisakaizana ary mitadiava fotoana hafa indray.
7. Manatreha fanofanana momba ny Asa Fitoriana sy fijoroana ho vavolombelona hahombiazanao kokoa
8. Resaho ny pasitoranao na ny Loholona hanampy anao hahay mitory sy hijoro ho vavolombelona
9. Manatreha kilasin’ny Baiboly / Kilasin’ny Mpanarato Olona
10. Raha tsy hainao ny mamaly fanontaniana, aza kivy fa manontania ny olona afaka hanampy anao amin’ny famaliana azy. Mazotoa manatrika fanofanana.
NY RAFITRA AO AMIN’NY FIANGONANA ADVANTISTA MITANDRINA NY ANDRO FAHAFITO
1. NY MAMBRY NY FIANGONANA EO AN-TOERANA
2. NY MISIONA/FEDERASIONA (MIASA AMIN’NY ALALAN’NY DISTRIKA)
3. NY UNION
4. NY KAONFERANSA JENERALY (MISY DIVIZIONA 13)
AZA ADINO! Ampianaro azy tsara ny Fitsipika Mifehy ny Fiangonana. Inona no mety hitarika fampiharana fitsipika? Ny fitsipi-pitondrantena Kristiana? Ny zo sy adidin’ny mambran’ny fiangonana? Tokantrano?
Zava-dehibe tokoa ny Sabata fa andro manokana io. Eo am-piandohan’ny herinandro dia tokony efa misaintsaina ny Sabata. isika ary tokony efa hosaintsainina ny hatao mialoha sy mandritra io andro io.
Alohan’ny hilentehan’ny masoandro dia efa tokony hilamina ny zavatra rehetra (ankanjo, ny kiraro, ny trano, sns) mba hahavonona tsar any ankohonana rehetra ho amin’ny andro lehibe ny Sabata.
Raha vao milentika ny masoandro dia vorio ny ankohonanao hidera sy hankalaza an’Andriamanitra satria fahatsiarovana ny namoronana anao io andro io.
Mandritra ny ora 24 n’ny Sabata dia atsahatra ny famakiana gazety, fijererena fahitalavitra, fihainoana radio tsy ara-pilazantsara. Hararaoty kosa io fotoana io hanorenana firaisam-po tsaratsara kokoa ao an-tokantrano. Ny hira masina, Video ara-pilazantsara ihany no azo jerena amin’ny Sabata.
Tongava mamonjy ny fivoriana fanombohana ny Sabata. Tokony hifoha maraina rehefa Sabata, manokana ora handinihan-tena sy Baiboly, misakafo maraina mialoha ary mamonjy ny fiaraha-miangona mba tsy ho tara fidirana amin’ny Sekoly Sabata. Araho hatramin’ny farany ny fotoam-pivavahana. Raha lavitra dia mitondra sakafo.
Ny Sabata tolakandro dia mbola Sabata mandrakariva. Araho ireo programa rehetra atao amin’izany: programan’ny Tanora, ny fanofanana samihafa, ny famangiana, ny Asa Fitoriana iarahana ary mandraisa anjara mavitrika amin’izany. Ny filentehan’ny masoandro no mamarana ny Sabata ka misaora an’Andriamanitra noho ny fitahiana sy fahamasinana ary fahafinaretana voaray nandritra ny Sabata.
Raha sahirana amin’ny fitandremana na fahazoana tsy miasa Sabata ianao dia manatona ny Loholona hanampiana anao. Mety hiatrika olana ianao kanefa rehefa mijoro hanaraka ny Sitrapon’Andriamanitra isika dia miditra an-tsehatra manampy antsika Andriamanitra ka mijoroa hatrany.
Hampiasa ny paikany rehetra Satana amin’ny fakam-panahy sy fanakiviana samihafa hampiverin-dalana anao kanefa aza matahotra fa Andriamanitra afaka mandefa anjely maro hiaro anao tsy ho lavo. Ary na lavo aza ianao tsy afoiny na ariany fa tiany sy areniny mandrakariva. Zanaka an-trano ianao ary Ankohonan’ Andriamanitra. Tadidio mandrakariva ny fanekena natao sy ilay andro nanoloranao tena ho an’I Kristy.
NB: Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana Ap 2:10.
NY FITANDREMAM-PAHASALAMANA: NEW START
Fandresena ny fahazaran-dratsy raha mbola misy tavela: PLANA 5 ANDRO, sns…
IREO FOTO-PINOANA 28: Tsindrio manokana ny fampiharana ny foto-pinoana faha-11: “fitomboana ao @ Kristy.”
AMPIANARO AZY SY TANTARAO IREO TANTARA SY LOVAN’NY FIANGONANA ADVANTISTA
Hanamafy sy hanatanjaka ny finoany ireny.
“Andeha hanaraka Ahy fa hataoko Mpanarato olona ianareo.”